कहिले होला सुनवाई ! - Merodesh.news
कहिले होला सुनवाई !
उच्च अदालत बिराटनगरको एक इजलासमा आफनो मुद्दाको पालो बुझन कजलिष्ट हेर्दै एक बृद्ध सेवाग्राही । अझै पनि अदालतमा धेरै पटक पेशी हटाउने र पुर्पक्षकालागि ढिलाई हुने कारणले गर्दा मुद्दाहरु समयमा फैसला हुन सकिरहेका छैनन ।
उच्च अदालत बिराटनगरको एक इजलासमा आफनो मुद्दाको पालो बुझन कजलिष्ट हेर्दै एक बृद्ध सेवाग्राही । अझै पनि अदालतमा धेरै पटक पेशी हटाउने र पुर्पक्षकालागि ढिलाई हुने कारणले गर्दा मुद्दाहरु समयमा फैसला हुन सकिरहेका छैनन । फोटो , मेरोदेश ।